Pamusoro-ZHEJIANG JINGLI TOOLS CO., LTD.
Zvinhu zvitsva zvekuuya
Zhejiang Jingli Zvishandiso Co., Ltd.
Brand kuumba kuvaka hombe brand brand
1. Wedzera mari mukushambadzira kwechiratidzo: Simbisa chiziviso chemusika chekambani VI nekushambadzira kwakaringana kwemusika, gadzirisa ruzivo rwekushambadzira, kugadzirisa hukama hweveruzhinji kuburikidza ne "nyika, gungwa nemhepo" chiteshi pamwe neakawanda-media system.
2. Wedzera zvigadzirwa zvemhando dzakasiyana: Pedzisa zvigadzirwa neketani nekudyara kwakananga, kutenga, mubatanidzwa kana OEM pasi pehunhu hwakavimbiswa. Parizvino kambani inovhara maturusi emagetsi, air compressor, lithium bhatiri maturusi, maturi ekurima ari makambani akazvimiririra anomhanya.
3. Simbisa mamiriro ekushandira ezvitoro zvepamusika: mumakore mashanu anotevera, kambani ichaita mari hombe kusimudzira zvitoro zvakashambadzirwa mumataundi 5 uye matunhu ehutongi 1,573 ane mufananidzo wechiratidzo, nzvimbo imwechete yekushandira uye zvigadzirwa zvakafanana zvinoratidza.
Vaka inodzorwa mashandiro mashandiro uye chiteshi zano
1. Sisitimu yebasa:
1. Vaka mushure mekutengesa sevhisi timu yekupa sevhisi yegoridhe inosanganisira maawa makumi maviri nemana ekunyunyuta mhinduro uye maawa makumi maviri nemaviri ekuchengetedza.
2. Chengetedza sekusarudzika kwekugadzira system uye vimbiso yekuendesa zvinhu kune vamiririri mukati memazuva matatu.
2. Chengetedza zvinhu zvinotiza nekuburitsa "Commodities Fleeing Management System" uye uvake nyanzvi timu yekudzora musika kubata musika zvinokanganisa zviitiko.
3. Chengetedza musika nekusimudzira zvitoro zvemaketeni zvakatengwa izvo "dunhu rimwe kana dunhu, chitoro chimwe", simba repakati rinoita kuti nhengo dzese dzeboka dzibudirire.
Vaka tsika yepamusoro yemabhizimusi, inokwezva matarenda
1.Ronga iyo "Tarenda yakanangidzirwa" manejimendi manejimendi saka munhu wese anovandudza nekambani anowana kurapwa kwakanyanya uye mari kuburikidza nekugadzirisa kugadzirisa uye tekinoroji yepamberi pasi pemamiriro akafanana ekushanda.
2. Pedzisa chirongwa chekusimudzira uye chekudzidzisa kuitira kuti vashandi vese vawane mukana wekusimudzira uye kurapwa kuburikidza nekudzidza uye kuita.
3. Kuvandudza tsika yevanamuzvinabhizimisi uye kuvaka hurongwa hwakasimba hwevashandi kuitira kuti munhu wese agone kutarisa mukushanda pamwe nekuedza kuita kuti kambani ibudirire.
Simbisa kugona kwemabhizimusi kugona uye kuita manejimendi manejimendi
1. Inovimbisa 100% kudzidza nekutakura kuburikidza ne ISO9001 yemhando yepamusoro sisitimu.
2.Tenga mabhizimusi manejimendi manejimendi uye akaonda maitiro ekugadzira saka panosvika 2020, makambani ebazi achawedzera kugona kwegore kusvika kumamirioni gumi seti.
3. Tora vashandi vane tarenda uye pedzisa iyo system yekusika saka zvigadzirwa zvigadzirwa zvinotsvagisa indasitiri kugadziridza, uye zvigadzirwa zvekuvandudza zvigadzirwa zvinotungamira musika zvinoda, ipapo misika inodaidzira kusunda zvigadzirwa kutsvagisa.
Pamwe Cooperation Uye Win-zvisamumirira
Kugadzira zvigadzirwa zvemhando yepamusoro, Kukurudzira kuvandudza indasitiri.
mota robhoti musangano
mota kukuya workshop
mota gungano mutsara
kufa vachikanda musangano
mhepo compressor musangano-01
mhepo compressor musangano-02
mutsara wegungano -01
mutsara wegungano -02
Matekinoroji emapurovhosi-akavakirwa madiki uye epakati-epakati mabhizinesi
18 Chitarisiko patents 14 Magetsi modhi patents 4 Zvigadziriso patents
Matunhu epamusoro-kukura epamusoro-tekinoroji mabhizinesi madiki nepakati
Middle East Nyika
Russia / South America / Europe
Maodzanyemba Akadziva Kumabvazuva Nyika Senge
Wire: 0086 13868900195
Wire: 0086 13967963496
Copyright © 2021 ZHEJIANG JINGLI TOOLS CO., LTD. Unyanzvi neMEEALL